Soorettii Kadir: ‘Kaayyoon kiyya jiruufi jireenya Oromoo walaloon ibsuudha’
HomeAfaan OromooSoorettii Kadir: ‘Kaayyoon kiyya jiruufi jireenya Oromoo walaloon ibsuudha’
Ebla 15, 2019 (BBC Afaan Oromoo) — Sooreettii Kadiir dhaloonni ishee magaalaa Adaamaa yoo ta’uu, kan guddattee immoo Awustraaliyaa magaalaa Melboornitti. Ijoollummaa ishee kan dabarsite hawaasa Oromoo biyyaa Awustraaliyaa jiran waliin yoo ta’uu, aadaa, duudhaa fi siyaasa ummaata Oromoo akka beektu akkasumas Afaan Oromoo sirriitti akka dubbattuuf ishee gargaaree himti.
Barnoota ishee sadarkaa tokkoffaafi lammaffaa achummatti baratte. Ittaansitees gosa barnootaa ‘Film Making’ jedhamu barachuuf kaayyoo akka qabdu dubbatti, Sooreettiin.
Sooreettiin walaloo Afaan Ingiliiziitiin waa’ee siyaasaa, jiruufi jireenya Oromoo, aadaa, eenyummaa ofii hubachuu akkasumas waa’ee dubartootaa, abdii fi kkf irratti xiyyeeffachuun Oromoota biratti beekamti.
“Walaloo barreessuuf waanan jireenya keessatti argutu na kakaase. Hamman beekuutti namni kamu seenaa himu qaba. Fakkeenyaaf, anis waanan hojjachuuf yaade tokko namni biraas akka kiyya yaadamoo jedhe of gaafadha,”
”Akkasumas sagaantaan tokko yoo jiraate, ykn sammuukootti wanni tokko yoo natti dhagahame yookiin yoo keessaa kiyyaatti gaafii natti ta’e; namni biraas akka kiyya yaadaa? jedhe of gaafadha. Gaaffiileen kunneen walaloo barreessuuf baay’ee na kakaasu,” jetti Sooreettiin.
“Karaa walaloo kiyyaan jireenya namoonni biraa keessa darban mul’isuu barbaada. Carraan qabuu hundaan waanan arge namoota biraatiif ibsuufi yaala” jetti walaleessituun Soorettiini.
Kaayyooni ishe inni guddaanis, karaa walaloo dhiyeessituutiin namoonni jiruufi jireenya isaanii, humnaa fi dandeettii argachuun haala keessatti argaman foyyeessu akka danda’an kakaasudha jetti Sooreettiini.
Walaloo ishee jalqabaa yeroo barnoota sadarkaa lammaffaa barattuu barreessuu kan dubbattu Sooreettiin, erga walaloo akka ogummaasheetti barreessuu jalqabde waggoota afur lakkoofsiisuu ishee ibsiti. Walaloo ishee yeroo garagaraatti hawaasa Oromoofi lammiilee biroof waltajjiiwwan gurguddoo akka Waldaa Qorannoo Oromoo (OSA) irraatti dhiyeessitee jirti.
Fakkeenyaaf, walaloo mata duree ‘Because I am who I am’ jedhuun waltajjii OSA kan bara 2015 irratti waa’ee eenyummaa ofii beeku ilaalchisuun dhiyeessitee turtees qalbii hirmaattoota sagantaa hawachuu BBC’tti himtee jirti.
Kana malees mata dureewwan hedduu jalatti kan walaloo barreessite yoo ta’u, ‘Sugar cane’, ‘How many screams’, ‘pain and Fear’ kan jedhanis isaan muraasa.
Sooreettiin walaloo qofaan hin daangeeffamne. Bara 2015’tti sagantaa raadiyoo ‘Oromo Voice’ jedhu irratti dhiheessitu sagantaa taate hojjataa turuus ni dubbatti.
Soorettiin dhalootumarraa qabee miidhama qaamaa qabdi. Haa ta’u malee, miidhamni qaamashee kunis bakka gahu barbaadu irraa akka ishee hin ittifne dubbatti.
Harmeen ishees ijoollummaa isheetii qabanii jajjabinni xinsammuufi gargaarsi isaan taasisaniif kan eddoo olaanaa qabu ta’u dubbatti. Fakkeenyaaf, ijoollummaa irraa kaasuun bakka barbaadu hunda qaqabu akka dandeessu itti himaatii guddachu himti.
“Qaama miidhamtuu ta’uun kiyyaa guyyaa tokkollee natti dhagahame hin beeku. Miidhamuun kiyyas bakkan qaqqabu barabaadu ykn hojjachuu fedhuurraa na hin dhorkine.”
Sooreettiin haala maatiin Oromoo ijoollee isaani aadaa, duudhaa, safuufi siyaasaa Oromoo itti barsiisan, gammachuu addaa keessa isheetti akka uumu dubbatti.
Sababni isaas maatiin Oromoo dirqama isaanii bahuu kan danda’an yoo ijoollee isaanii waan kanneen barsiifatan qofaa waan ta’eefiidha jetti.
”Anis akka dargaggeettii Oromoofi nama biyyaa ala jiraatuutti, keessattu ijoolleefi dargaggoonni Oromoo aadaafi eenyummaa isaanii akka beekan gochuuf hamma naaf danda’ame hojjachaan jira.”
Seenaa fi Faarulee Alaabaa Oromoo – hanga tokko
OMN: Kabaja Guyyaa Goototaa Magaalaa Ambootti (Eebla 15, 2019)